डण्डीफोर आएर हैरान हुनुहुन्छ नआतिनुस् ! यस्ताछन् ! डण्डीफोर हटाउने घरेलु उपाय • Nepal's Trusted Digital Newspaperडण्डीफोर आएर हैरान हुनुहुन्छ नआतिनुस् ! यस्ताछन् ! डण्डीफोर हटाउने घरेलु उपाय • Nepal's Trusted Digital Newspaper
काठमाडौँ, २० जेठ । डण्डीफोर आम समस्या हो । यसले अनुहारको सुन्दरता बिग्रन्छ कि भनेर मानिसहरू चिन्तित हुन्छन् । डण्डीफोर निको भए पनि दागको रुपमा यो लामो समयसम्म रहिरहन्छ । डण्डीफोरलाई चाँडो निको बनाउने धुनमा त्यसलाई निचोर्नु नै समस्या निम्त्याउनु हो । फेरि त्यसको दागलाई हटाउने नाममा प्रयोग गरिने क्रिमले छालामा साइडइफेक्ट गर्न सक्छ । यहाँ डण्डीफोर हटाउने घरेलु उपायको चर्चा गरिएको छ ।